Ogaden News Agency (ONA) – Weerar lagu qaaday Darguduudo oo cadawga lagu jabiyay
Weerar lagu qaaday Darguduudo oo cadawga lagu jabiyay
Posted by ONA Admin	/ May 1, 2012
26/4/12 CWXO ayaa weerar ku qaaday ciidanka cadawga oo joogay goobta lagu magacaabo Darguduudo oo ka tirsan deegaanka Boodhcaano ee degmada Goday.
Ciidankii cadawga ee goobtaas lagu weeraray ayaa xaladisii waxay intoodii badnayd maciin bideen cagahoodii. Weerarkan ay qaadeen Naftood-huraaysha qaybta Birjeex ee CWXO ayaa waxaa cadawga lagaga dilay in ka badan 10 askari waxaana looga dhaawacay 15 kale. Weerarkan ayaa la sheegayaa in cadawga looga furtay Hub u badan qoryaha AK 47, rasaas iyo saanad ciidan oo kale.
Wararka naga soo gaadhaya qaybta Birjeex ayaa sheegaya in qaybo ka mid cadawga aan ilaa hada la ahayn meel ay ku danbeeyeen.
24/4/12 weerar xoogan ayaa lagu qaaday ciidanka cadawga labadii galin ee maalintaas meesha loo yaqaan Sancade oo ka tirsan deegaanka Goday waxaana la sheegayaa in cadawga loogu gaystay khasaare lixaadle oo dhimasho iyo dhaawacba leh.
Wararka kalee naga soo gaadhaya xarunta dhexer ayaa sheegayaa inay jiraan weeraro xoogan oo lagu qaaday deegaamo kala duwan kuwaas oo aanay wali soo bixin faahfaahinta khasaaraha cadawga gaadhay, waxaana ka mid ah goobahaas Qorijabkaka iyo Hoola oo ka tirsan deeganka shaygoosh, Dhariyaha oo ka tirsan deegaanka yoocaale. Warbixinta dagaaladaa ayaan gadaal ka soo sheegi doonaa haduu Eebe idmo.